Madaxa Fiorentina oo xaqiijiyay in Julian Alvarez uu u dhaqaaqaya Manchester City. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Madaxa Fiorentina oo xaqiijiyay in Julian Alvarez uu u dhaqaaqaya Manchester City.
Madaxa Fiorentina oo xaqiijiyay in Julian Alvarez uu u dhaqaaqaya Manchester City.
Agaasimaha ciyaaraha Fiorentina Daniele Prade ayaa xaqiijiyay in kooxdiisu ay lumisay saxiixa Julian Alvarez ee River Plate ee Manchester City ku waajahan .
Kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhowdahay saxiixa xiddiga heerka caalami ee dalka Argentina qiimo dhan €18.5m (£15.4m) oo ay ku jiraan gunnooyin.
Manchester United iyo Fiorentina ayaa sidoo kale lala xiriirinayay inay u dhaqaaqi doonaan Alvarez oo aad loo qiimeeyo, madaxa La Viola Prade ayaa shaaca ka qaaday in 21 jirkaan uu dhawaan imaan doono Etihad.
Isagoo la hadlayay Firenzeviola , Prade ayaa yiri: “Waan raacnay isaga muddo dheer, laakiin waligeed looma baahneyn in aan qaadno, haatana waxaa qaaday Manchester City.
Agaasimaha Viola ayaa su’aal ka keenay go’aanka Alvarez, isagoo raaciyay: “Ma garanayo haddii doorashada aaditaanka City ay tahay mid ku habboon isaga, marka loo eego horyaalada faraha badan, way adkaan doontaa in la sii wado.”
Alvarez ayaa ku dhameystay xilli ciyaareedka 2021 isagoo dhaliyay 18 gool iyo sagaal caawin 21 kulan oo uu saftay horyaalka La Liga, waxaana uu u saftay kulankiisii ​​lixaad ee xulka qaranka Argentina isagoo bedel ku soo galay ciyaar ay 2-1 kaga badiyeen Chile khamiistii isreebreebka Koobka Adduunka.
R/W Rooble: “Madaxweyne XASAN waxaan leeyahay, dalkaan ka ilaali milkiile”
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo wareysi xasaasi ah siiyey VOA ayaa ka hadlay...
Wararka Suuqa Kala iibsiga Caawa: Kylian Mbappe, James McAtee, Sergio Reguilon,...
Deg deg Qorshaha In La Weeraro Degmada Kaaraan oo La Diyaariyay,...
Madax wareer siyaasadeed oo haysta Rooble
Dacwo La rabo in Lagu Furo RW Rooble Si looga joojiyo...
Deg Deg Xogtii Ugu Dambeysay Dhex-dhexaadintii Farmaajo & Rooble, Cabsi Ka...
Daawo: Shan sano kadib arrinta ugu weyn ‘ee lagu xusuusto’ Farmaajo
Liverpool oo xiiseyneysa Saxiixa Xidig ka tirsan Kooxda FC Porto